FAQs - Qingdao Renergy Qalabka Co., Ltd
Sidee marawaxadaha dabaysha ka dhigi korontada?
Dabaysha ayaa garbaha ku wareegsan oo toobad keen; this dhigeeysa usheeda dhexe, kaas oo isku xira in matoor. matoor A saarta tamarta korontada ka tamarta si farsamaysan.
Maxaa size of marawaxadaha dabaysha ayaan u baahanahay?
Tani waxay ku xiran tahay baahida tamarta. Fadlan xisaabiyo isticmaalka korontada max maalin kasta. Celcelis ahaan, guri caadi ah American u baahan tahay marawaxadaha yar oo 5kw ama marawaxadaha 10kw.
Waa maxay muddada ay bulshsada celcelis ahaan?
Dhererka muddada ay bulshsada waxay ku xiran tahay marawaxadaha ah, tayada dabayl goobta rakibo, heerka korontada ka jirta, iyo maal la heli karo iyo dhiirigelin. Iyadoo ku xiran arrimo kuwaas oo kale, waqti ay qaadato si buuxda u bogsadaan kharashka marawaxadaha dabaysha yar meel kasta laga bilaabo 6 ilaa 30 sano waxay qaadan karaan.
Sidee nidaamka yar dabaysha hayo?
kormeerka joogtada ah waxaa lagu sameeyaa dhowr sano kasta hal of marawaxadaha ah ee 20 + -jir dari. rakibayo A xirfad ama farsamo tababaray (sida caadiga ah soo saaraha ama dealer in iibin marawaxadaha ah) ilaaliyaan marawaxadaha iyo ilaa munaaraddii kor marayo kormeer jirka, inkasta oo qaar ka mid ah marawaxadaha lagala socon karo meel fog ka computer guriga.
Ma u baahan tahay qorshaynta ogolaansho?
rakiban Energy Wind Small u baahan karaan ogolaansho qorsheynta iyo waa in aad had iyo jeer la tasho maamulka deegaanka. Guud ahaan, siyaasadaha qorshaynta qaranka taageeraan horumarinta yaryar Wind Energy.
Ma marawaxadaha dabaysha buuqa?
Our Small Wind marawaxadaha ayaa loogu talagalay in ay aad u xasilloon, tusaale ahaan adigoo nidaamka drive toos ah si looga fogaado in buuq sanduuqa marsho iyo in la kordhiyo tayada shaqo. Guud ahaan, dabayl laftiisa buuq badan samaysa marawaxadaha dabaysha a dhigaysa. Kaasu waa kan ugu lagama yaabo in buuq kasta oo ka Wind Small marawaxadaha waa la maqli doonaa in ka badan 30 m. qaylada waa in duurka ku wareegsan 40-50 dB (A).
taageero nooc 7.What ku siin kartaa on-site rakibo?
Ka hor inta rakibaadda, waxaan ku siin doonaa buuga farsamo oo dhan. Dhanka kale waxaan kuu soo diri karaa farsamo si ay u kormeeraan rakibo.
8.How waxaan dooran kartaa nidaamka macquul ah?
Haddii mashruuca waa ka fog tahay shabakadda Roobka dadweynaha iska, ka dibna aad ka fiirsan kartaa nidaamka Roobka.
Haddii aad rajaynayaa in la yareeyo heerka korontada, ka dibna aad ka fiirsan kartaa nidaamka Roobka.
iyaga marka laga reebo, aan ku siin karaan saldhigga Roobka / isgaarsiinta micro iyo dabaylaha nidaamka hybrid qoraxda sida ay xaalado kala duwan.
9.Maybe waxaan kaliya ka iibsan kartaa qaybaha qaar ka mid ah sida daab, inverter, iyo ilaa munaaraddii kor?
Haa, aad awoodo. mashruuc kasta oo la xiriira, soo dhaweyn share nala.
Marka laga reebo wax soo saarka, waxa kale ee aad samayn kartaa?
Waannu karaynaa mas'uul ka design, falanqaynta, xisaabinta, rakibaadda iyo adeeg.